Esperance yakasimudzamukombe weCAF Champions katatu uku FC Platinum yakapinda mumini League kekutanga iri kutatarika zvakasimba ichikwanisa kungoita mapoinzi maviri chete pamitambo mishanu zvichireva kuti ndiyo iri pasi muGroup B.
Esperance ndiyo iri pamusoro mugungano iine mapoinzi gumi nerimwe. FC Platinum yakatobuda mumakwikwi aya kare zvekuti changosara kungobudawo nechiremera nekukunda chikwata chine mukurumbira ichi.
Pamusoro pemikombe mitatu yeCaf Champions League, Esperance yakambotora zvekare mukombe weAfrica Super Cup pamwe neweCaf Confederation Cup.
Payakapedzisira kutamba mumakundano aya kuSouth Africa, FC Platinum yakaita rombo rakaipa apo yakakandwa chibodzwa, mutambo wave kupera vakatungamira 2-1, mutambo uyu ndokupera uri mangange
Mumwe muteveri wechikwata ichi Muzvare Olivia Mushipe vanoti FC Platinum ikatamba sezvayakaita neOrlando Pirates kuOrlando Stadium masvondo maviri apfuura inokwanisa kudonhedza gomo guru remuAfrica iri.
Imwe nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association VaObert Masvotore vanoti FC Platinum haifanire kuvhundutsirwa nemazita nekuti zvikwata zvakaita seEsperance zvinoroveka.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vaMaxwell Mufandaedza vanoti vachitarisa matambiro avakaita kuTunisia, negadziriro yavaita ikozvino, varikuona chikwata chavo chichikunda, vachitiurira zvibodzwa.
Asi FC Platinum inennge isina vatambi vatatu mumutambo uyu nekuda kwemacards avakapihwa, vatatu ava vanoti Gift Bello, Elvis Moyo naKelvin Madzongwe.
Pavakatambira kuTunis, FC Platinum yakarohwa 2-0 mumutambo uyo vakatambisa mikana yakawandisa.
Mune mamwe makwikwi ange akatarisirwa nevakawanda eUEFA Champions league, draw yemaquater finals yemutambo uyu yakamira yakadai